Miyey Kooxda Barcelona qorsheynaysaa inay iska iibiso Ousmane Dembele?? – Gool FM
(Barcelona) 10 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay sii haysato xiddigeeda Ousmane Dembele.
Wargeyska Sport ee ka soo baxa dalka Spain ayaa daabacay in kooxda kubadda cagta Barcelona ay qorsheynayso inay sii haysato Ousmane Dembele oo uu ku jiro qorshaheeda.
Kooxda ka dheesha horyaalka La Liga ayaa qorsheynaysay in suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha janaayo ay iska iibiso ku guuleysata Koobka Adduunka, laakiin dhaawac soo gaaray da’yarkeeda Ansu Fati ayaa ku qasbay inay beddelaan mowqifkooda.
Arsenal oo doonista saxiixa xiddig ka tirsan Inter Milan kula soo biirtay Kooxaha Manchester United iyo Liverpool